Yakavanzika mutemo - Dhizaina Dhizaina
CHIKAMU 1 - TII KUITA NEZVAZVO ZAKO?
Paunotenga chimwe chinhu kubva mudura redu, sechikamu chekutenga uye kutengesa nzira, tinounganidza ruzivo rwemunhu iwe unotipa sezita rako, kero uye email.
Paunotarisa dare redu, tinowanzogamuchira kombiyuta yako ye internet internet protocol (IP) kuitira kuti utitore ruzivo runotibatsira kudzidza nezve browser yako nekushanda kwayo.
Email marketing (kana zvichibvira): Nemvumo yako, tinogona kukutumira ma email pamusoro pedu redu, zvitsva nezvimwe zvinoshandiswa.
CHIKAMU 2 - CONSENT
Unogamuchira sei kubvuma kwangu?
Paunotipa ruzivo rwemunhu pachake kuti apedze mutengesi, chengetedza kadhi rako rekwereti, ita urongwa, kuronga kuti kubhadhara kana kudzorera kutenga, tinoreva kuti iwe unobvuma kuunganidza kwedu nekuishandisa nekuda kwechikonzero ichocho chete.
Kana tikakumbira ruzivo rwenyu rwechikonzero rwechikonzero chechipiri, sekutengesa, tinogona kukubvunza zvakananga kubvumirwa kwako, kana kukupa mukana wekuti kwete.
Ndinobvisa sei kubvumirana kwangu?
Kana mushure mekusarudza-mukati, ukachinja pfungwa, unogona kubvisa mvumo yako kuti tibate iwe, kuitira kuenderera kuunganidzwa, kushandisa kana kuzivisa ruzivo rwako, chero nguva, nekutibata nesu pa info@dznrspot.com kana kutumira tsamba kwatiri pa:
CHIKAMU 3 - KUZIVA
Tinogona kuzivisa ruzivo rwako pachako kana isu tichida nemutemo kuti tiite kana kana iwe ukatyora mitemo yedu yebasa.
Isu tinochengeta yako data pane yakachengeteka server seri kwe firewall.
Kana ukasarudza nzira yekubhadhara yakananga yekupedzisa kutenga kwako, ipapo Shopify anochengeta dhidhi yako yedhadhi rekwereti. Iyo yakavharidzirwa kuburikidza nePayment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Kutenga kwako kutengesa deta zvakachengetwa chete kwenguva yakareba sezvinodiwa kupedza kutengesa kwako kutenga. Mushure mezvo izvi zvakakwana, ruzivo rwako rwekutenga rubatsiro rwakabviswa.
Zvose zvinokonzerwa nekubhadhara zviyero zvinoenderana nemitemo yakagadzirirwa nePCI-DSS sezvinotungamirirwa nePCI Security Standards Council, iyo inobatanidza mazita akaita seVisa, Mastercard, American Express uye Discover.
PCI-DSS zvinoda kubatsira kuchengetedza zvakachengetedzwa kwekadhi rechikwata chekwereti nechitoro chedu nevatapi varo.
Kuti uwane mamwe mazano, unogonawo kuverenga Mitemo yeBasaify (https://www.shopify.com/legal/terms) kana Privacy Statement (https://www.shopify.com/legal/privacy).
CHIKAMU 5 - THIRD-PARTY SERVICES
Nenzira yakawanda, vateresi vatatu vanoshandiswa nesu vachaunganidza, kushandisa uye kuzivisa ruzivo rwako kusvika pamwero wakafanira kuvabvumira kuita mabasa avo atinopa kwatiri.
Kunyange zvakadaro, vamwe vatatu vebasa rekupa basa, zvakadai semasuo ekubhadhara uye mamwe maitiro ekubhadhara mutero, vane mazano avo ehunoga maererano nezvese zvatinofanira kugovera nokuda kwekutengeserana kwako.
Kune ava vatapi, tinokurudzira kuti uverenge maitiro avo ega ega kuitira kuti iwe unzwisise nzira iyo iwe ruzivo rwako pachako huchagadziriswa nevatapi ava.
Kunyanya, yeuka kuti vamwe vatapi vangave vari mukati kana kuti vane zvivako zvinowanikwa pane hutongi hwakasiyana kupfuura iwe kana isu. Saka kana ukasarudza kupfuurira nekutengeserana kunosanganisira mabasa ehutatu wevhisi webasa, ipapo ruzivo rwako rungave rwuri pasi pemitemo yehurumende (s) iyo iyo mvumo yevashandi kana zvivako zvayo zviripo.
Somuenzaniso, kana iwe uri kuCanada uye kutengeserana kwako kunoshandiswa nehizha rekubhadhara rinowanikwa muUnited States, ipapo ruzivo rwako pachako rwunoshandiswa pakuzadzisa mutengesi iwoyo unogona kuzviisa pasi pehurumende yeUnited States, kusanganisira Patriot Act.
Kana ukangosiya webhusaiti redu redu kana ukadzorerwa kune wechitatu webhusaiti kana webhutisheni, haugoni kutungamirirwa neChirongwa cheNzvimbo Yechirangariro kana Mitemo Yedu Yesebasa.
Kana iwe ukanyora pazvibatanidza pachitoro chedu, vanogona kukuendesai kubva panzvimbo yedu. Isu hatisi mhaka yehutsika hwehumwe hwemasayiti uye tinokukurudzira kuti uverenge zvinyorwa zvadzo zvevamwe.
Chitoro chedu chinoshandisa Google Analytics kutibatsira kudzidza nezvekushanya kwezvitoro uye mapeji ari kutariswa.
CHIKAMU 6 - KUTSUNGA
Kuti uchengetedze ruzivo rako pachako, tinotora matanho ekuchengetedza uye tinotevera mhizha michina yakanaka yekuita chokwadi kuti haina kukodzera kurasikirwa, kusashandiswa zvakashata, kuwanikwa, kuziviswa, kuchinjwa kana kuparadzwa.
Kana iwe uchititumira nekodha yako yekadhi yemarikiti, mashoko acho akavharidzirwa achishandiswa shato yakachengetedza teknolojia (SSL) uye akachengetwa neAES-256 kufungidzirwa. Kunyange zvazvo pasina nzira yekutsvaga paIndaneti kana kuvhara kwemagetsi ndeye 100% yakachengeteka, tinotevera zvose zvePCI-DSS zvinodiwa uye tinoshandisa zvimwe zvinowanzogamuchirwa nemabhizimisi.
CHIKAMU 7 - COOKIES
Heino urongwa hwekiki dzatinoshandisa. Takaisa mazita apa kuitira kuti iwe unogona kusarudza kana uchida kusarudza-kubva kwekiki kana kwete.
_session_id, chikwangwani chakasiyana, sarudzo, Inobvumira Shopify kuchengetedza ruzivo pamusoro pepurogiramu yako (referrer, peji yekutsika, nezvimwe).
_shopify_visit, hapana data yakachengetwa, Kushivirira kwemaminitsi 30 kubva pakupedzisira kushanyira, Kushandiswa ne webhusaiti yedu yepainternet stats tracker kuti inyore nhamba yekushanyira
_shopify_uniq, hapana data yakachengetwa, inopera pakati peusiku (maererano nemushanyi) wezuva rakatevera, Inotora nhamba yekushanyira kuchitoro nemumwe mutengi.
Ngoro, yerimwe chiratidzo, inoramba ichiuya kwevhiki dze2, Inochengetedza ruzivo pamusoro pezviri mukati memotokari yako.
_secure_session_id, chete chiratidzo, session
Storefront_digest, chiratidzo chisingaenzaniswi, zvisingaiti Kana denga rine password, izvi zvinoshandiswa kuziva kana muenzi wenguva ino anokwanisa.
PREF, inoshingirira kwenguva pfupi kwazvo, Yakagadzwa neGoogle uye matraki anoshanyira chitoro uye kubva kupi
CHIKAMU 8 - MAKORE OKUITA
Nokushandisa sendimi iyi, iwe unomiririra kuti iwe unenge uine makore ehuwandu munyika yako kana chirongwa chekugara, kana kuti iwe uri wehuwandu huri munyika yako kana hurumende yaunogara uye iwe wakatipa mvumo yako kubvumira chero Vana venyu vaduku vanogona kushandisa sendimi iyi.
CHIKAMU 9 - KUSINZWA KWENYAYA YAKASIMBA YAKO
Tinochengetedza kodzero yekushandura iyi purogiramu yega yega yega, saka tapota itaiongorore kakawanda. Kuchinja nekujekeswa zvichaitika nokukurumidza pavanenge vachitumira pawebsite. Kana tikashandura mararamiro aya kumutemo uyu, tichakuzivisai pano kuti yakagadziridzwa, kuitira kuti iwe uzive ruzivo rwedu rwedu rwedu rwatinounganidza, kuti tinoshandisa sei, uye pasi pemamiriro api, kana pane, tinoshandisa uye / kana kuti takazivisa It.
Kana dare redu rakawanikwa kana rakabatanidzwa neimwe kambani, ruzivo rwako rungatamiswa kune vashandi vatsva kuitira kuti tigone kuramba tichikutengesa zvigadzirwa kwauri.
MIBVUNZO NOKUTAURA KUNOGARA
Kana iwe uchida ku: kuwana, kururamisa, kugadzirisa kana kudzima chero ruzivo rwepamoyo rwatinarwo pamusoro pako, kunyoresa chichemo, kana kungoda ruzivo rwakawanda taura nePrivacy Compliance Officer pa info@dznrspot.com kana netsamba pa